कोभिडसँग लड्ने क्षमताका लागि के खाने, कस्तो खाने ? (यस्तो छ विज्ञको सुझाव) - रामारोशन टुडे
कोभिडसँग लड्ने क्षमताका लागि के खाने, कस्तो खाने ? (यस्तो छ विज्ञको सुझाव)
काठमाडौं । कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लडने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दएका छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइरालाले खाने कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार तेलमा तारेर बनाइएको परिकारहरु कम खानुपर्नेछ ।
बजारमा पाइने चिल्लो, सुकिलो र सफा देखिने खाद्य वस्तुहरुमा बढी विशाक्त प्रयोग भएको हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नसमेत उनले सुझाएका छन् । त्यस्तै ब्रोइलर कुखुराको मासु धेरै नखानसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
ब्रोइलर कुखुरामा धेरै एन्टीबायोटिक प्रयोग भएको र जेनेटिक मोडिफाइडसमेत भएकाले ब्रोइलर कुखुराको मासुको कम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै खसी-बोकाको मासुको उपभोग पनि कम गर्न उनले सुझाएका छन् । कोकाकोला, फेन्टालगायत पेय पदार्थ कम प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।